Jonga isikhokelo sethu sokwamkelwa ngokukhawuleza »iYunivesithi yaseHodges
Wamkelekile iiHawks zexesha elizayo!
Wamkelekile kwiHodges U! Siyazi ukuba ukukhetha ukuqhubekeka nemfundo yakho sisigqibo esonwabisayo, esigcwele nemibuzo. NgeHodges U, sikugubungele.
Abaququzeleli bethu beKholeji abaqeqeshiweyo baya kukunceda ekuhambiseni isicelo sakho ngenkqubo yokwamkelwa. Nokuba unomdla kwisidanga sokuqala, isidanga sokuqala, i-ESL, okanye iziQinisekiso, silapha ukukunceda ufumane olona lukhulu kumava akho ekholejini.
Inyathelo lokuqala lelona linzima. Qalisa uhambo lwakho namhlanje.
Ukujonga ngokukhawuleza kokungeniswa kwethu inkqubo
Gcwalisa isicelo sakho.
Thetha noMcebisi wakho woKwamkelwa.
Ngenisa amaXwebhu akho axhasayo.
Ukwamkelwa, ukuQhelaniswa nokuBhaliswa. Usondele apho!
Ngaba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nenyathelo ngalinye? Apha ngezantsi siza kuhamba kuyo yonke le nkqubo.
Inkqubo yokuKhangela kwesiDanga
Inyathelo 1-Ngenisa isicelo sakho
Isinyathelo sokuqala kwinkqubo yokwamkelwa kwabafundi kukungenisa isicelo sakho. Oku kunokwenziwa kwi-Intanethi ngokungenisa isicelo esikhawulezayo okanye ngokundwendwela ikhampasi yethu eFort Myers.
Inyathelo 2-Nxibelelana noMcebisi wakho woKwamkelwa
Ukuba ungenisa isicelo sakho esikhawulezayo kwi-intanethi, umcebisi wakho wokwamkelwa buqu uya kuqhagamshelana nawe ngefowuni, isicatshulwa, kunye / okanye i-imeyile ukuseta ixesha lokuxoxa ngekamva lakho eHodges U. Le ngxoxo inokubanjwa kwifowuni okanye kumntu ikhampasi yethu yaseFort Myers.
Injongo yengxoxo yokwazisa kukukunceda ubone ukuba ngaba iYunivesithi yaseHodges ilungile kusini na kwiimfuno zakho zemfundo ephezulu kunye nokwakha ngokudibeneyo indlela yesiqhelo yemfundo yakho kwiYunivesithi yaseHodges. Nje ukuba eli nyathelo ligqityiwe, uyakufumana isimemo kwindawo yethu yoluntu apho uya kugqibezela khona isicelo sakho, ungenise nawaphi na amaxwebhu anokufuneka, kwaye uhlawule umrhumo wesicelo sakho.
Ukuba ungenisa ngokwakho isicelo kwikhampasi, amanyathelo 1 kunye no-2 angadityaniswa.
Inyathelo 3-Ngenisa amaXwebhu akho
Amaxwebhu ayimfuneko anokuhluka ngokwenkqubo yakho yomdla, imbali yezemfundo, indlela yokuhlawula, kunye nenqanaba lokuba ngummi. Umcebisi wakho wokwamkelwa uya kukukhokela kumaxwebhu afunekayo.
Amaxwebhu afunekayo angabandakanya:
Amaxwebhu oNcedo lwezeMali
Sukuba nexhala lokuba siza kuba lapho ukukunceda kwinkqubo yamaxwebhu. Senza kube lula kangangoko!
Inyathelo 4 nangaphaya kwalo-Ukwamkelwa kunye nokuBhaliswa. Usondele apho!
Nje ukuba ugqibezele inkqubo yokwenza isicelo, uyakufumana isigqibo sakho sokwamkela zingaphelanga iintsuku ezimbalwa. Siza kuqhakamshelana nawe ukugqibezela ubhaliso lwakho, kwaye uza kubhaliswa ngokusemthethweni eHodges U!
Yiba Nesibindi. Faka isicelo namhlanje.
Iinkqubo zobhaliso ezizodwa
Iinkqubo ezithile zifuna iinkqubo zobhaliso ezizodwa ukongeza kumanyathelo okwamkelwa apha ngasentla. Nceda ubone la maphepha angezantsi ngolwazi lwenkqubo ethile.
Imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zeYunivesithi yaseHodges ngokubhekisele Amalungelo omfundi noxanduva kwaye Isikhalazo Somfundi zipapashwe kwiNcwadi yoMfundi yoMfundi, enokufumaneka Apha.
Kwimeko apho umfundi evakalelwa kukuba isikhalazo asikhange siphathwe ngokufanelekileyo liziko, umfundi angangenisa isikhalazo sakhe kulunxibelelwano lukarhulumente lulandelayo:
Abafundi be-Out-of-State abaFundisayo:
Inkqubo yesikhalazo yabafundi abangafundanga kumabanga emfundo abathathe inxaxheba phantsi kwesiVumelwano sikaRhulumente sokuGunyazisa ukubuyisana (i-SARA), abagqibe inkqubo yezikhalazo yeziko langaphakathi kunye nenkqubo yesikhalazo sikarhulumente esisebenzayo, banokufaka isibheno kwizikhalazo ezingezizo ezokuya kwisivumelwano sokugunyazisa ukwamkelwa kwabantu baseFlorida. (FL-SARA) IBhunga lokuLungelelanisa iMfundo yoPhuculo lwePosi yamabanga aphakamileyo (PRDEC) e FLSARAinfo@fldoe.org.
Ngolwazi olongezelelweyo ngenkqubo yesikhalazo, nceda undwendwele Inkqubo yeZikhalazo yeFL-SARA iphepha lewebhu.